Burn Tool (2)
Flash Creation Tool (1)
Photo Instrument (1)
Video Edits Tool (1)
Pixarra Pro 16.18
အ်ုယိုဝ်ဏှ် မွဲာဝေ့ Pixarra Pro 16.18 ဆှေ်လဝ့် အ်ုဝေ့ယိုဝ် မွဲာဝေ့ လ်ုမုဆူ့ဆ်ုဟှင် Softwear ဆှေ်လဝ့် ထီသိုဝ်သယ် လု္ဘးသာဆူ့ဆ်ုဟှင် လ်ုဖး အင်းမာဏေဝ်ၟ Softwear လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်။ 16.58mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 3:01 AM0comments
Aimersoft DVD Copy v2.3.0.2
အ်ုယိုဝ်ဏှ် မွဲာ Aimersoft DVD Copy v2.3.0.2 ဆှေ်လဝ့် မာဏ်ှလယ့် စါ်္ဘိုဝ် မွဲာဝေ့ DVD Copy ယ္ဘာိုဝ် ထီသိုဝ်သယ် Burn softwear လ်ုအှ်္ဘးစါ်္ဘိုဝ် အင်းမာဏှေ် ဍေ Softwear လ်ုမိင်ယိုဝ် မာက်ုလုင့်သီးခဝ့် ဖႜဲာဆှေ်လဝ့် မ်ုသီးယာ့္ဘးသာ စါ်္ဘိုဝ် အင်းမာဏေဝ်ၟ လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 5.11mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 1:10 AM0comments
Labels: Burn Tool
အ်ုယိုဝ်ဏှ် မွဲာဝေ့ PDF Creator Plus 4.0 ဆှေ်လဝ့် အ်ုဝေ့ယိုဝ်ဏှ် ထီသိုဝ်သယ် ဍောဟ်လိက် မ်ုတါင်္ဘးသာ PDF သယ်ဏှ်္ဘးအင်းမာဏှေ် ဍေ Softwear လ်ုမိင်ယိုဝ်ဟှဝ် အ်ုဝေ့ယိုဝ် မာဖှေ်လင့်ဟု PDF, TIFF, JPEG, သယ်ယာၟ္ဘိုဝ် (အ်ုဍံင်) ဍောဟ်လိက်သယ်ဟှံင် မ်ုထုဂ်လင်း printer အ်ုလင်ၟဏှ် လဲုဏှေ် PDF Creator Plus ဏ်ှဆာ်ၟ အေဟှံင် ထုဂ်လင်း PDF, TIFF, JPEG, file ဏှေ်ယုဂ် အ္ဘေးသာ အင်းမာဏေဝ်ၟ လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 11.64mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 12:17 AM0comments
အ်ုဝေ့ယိုဝ် မွဲာ Panda Internet Security 2011 ဆှေ်လဝ့် အ်ုဝေ့ယိုဝ် မွဲာဝေ့ Antivirus Softwear လ်ုမိင် ဆှေ်လဝ့် ထီသိုဝ်သယ် Computer ဏှ်္ဘးအ်ှဝေ့ ဍေ Antivirus Softwear ကိုဝ်ဟှာဍေလဝ့် လ်ုအှ်္ဘးလ်ုမိင်္ဘးအ်ှလုမိင် လ်ုအှ်ဏင်မိင်္ဘးစါ်္ဘိုဝ် သှေ်အေး္ဘးသာမဲာ virus သယ်မ်ုဏုဂ်လင်ယ္ဘာိုဝ် အ္ဘေးသာသီး္ဘေ့သိုဝ် မ်ုအှ်ကိုဝ်မိင်သိုဝ် ယ်ုအင်းဟှု့ပ်ုကုံဖှေ် ထီသိုဝ်သယ် ကိုဝ်ဟှာဍေ ဆေဝ်လဝ့် အ်ုဝေ့ယိုဝ် Activation code: ပါလ်ုဏိင်းဟှင်ဟှဝ် အ္ဘေးသာစါ်္ဘိုဝ် အင်းမာဏေဝ်ၟ လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 59.39mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 4:25 AM0comments
Super Hide IP 2.1.1.2 Final
အ်ုဝေ့ယိုဝ်မွဲာ Super Hide IP 2.1.1.2 Final ဆှေ်လဝ့် မွဲာဏ်ှလယ့် စါ်္ဘိုဝ် မွဲာဝေ့ အင်လယ်ဖံင်း IP. ဆေဝ်ၟလဝ့် (အ်ုဍံင်) ထီသိုဝ်သယ် ဖံင်း Internet ဏှ် အ်ှဍေ IP. ကိုဝ်ဟှာဍေလဝ့် ထီသိုဝ်သယ် အ်ှထီ့ခင်ၟ ခဝ့်လယ် အ်ုအင်းဃှူ့ IP. စါ်္ဘိုဝ်ဍးလဝ့်္ဘေ့သိုဝ် လ်ုသီၟယာ့ဝသိုဝ် အ်ုအင်းမိုင့် ဍေ softwear လ်ုမိင်ယိုဝ် စါ်္ဘိုဝ် အင်းလဝ့်ခွိက် IP. ဏှေ်လဝ့် ထီသိုဝ် IP. အ်ုမဝ့်ဏှ် ဖႜဝ်လိုင်အေးယ္ဘာိုဝ် ထီသိုဝ်သယ် အ္ဘေးသာသီၟယာ့ စါ်္ဘိုဝ် အင်းမာဏှေ် လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 2.27mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 4:39 AM0comments
Labels: IP Hide
Photo Instrument 3.9 Build 395
အ်ုယိုဝ်ဏှ် မွဲာဝေ့ Photo Instrument 3.9 Build ဆှေ်လဝ့်ဟှဝ် အ်ုဝေ့ယိုဝ်္ဘးစါင့်လု တါင်ဆ်ုဟှင် သယ်ခဝ့် အ်ုဝေ့ယိုဝ် ဟှေ်တ်ုယှာၟဟှဝ် ထီသိုဝ်သယ် မ်ုသီးယာ့ဍးသာလဝ့်္ဘးဍံင်္ဘးဖံင်း္ဘးတါင်သီး ယဝ့်မာလဝ့် ထီသိုဝ်သယ် လု ဖင်း Photoshop သယ် လ်ုသှေ်္ဘး လ်ုဖး အ်ုဟှင်္ဘးတ်ုကှေ်မာလဝ့် စင်းယောဝ်ဟှဝ် အ္ဘေးသာ အင်းမာဏှေ် လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဟှဝ် ထီသိုဝ်သယ်ဟှေး (သ္တါ်) ဟှဝ် ဆူ့လင်အေဟှံင်ဏှ် internet ဏှ် ပိက်သီ့ဍးဟှဝ် အေဖံင်းဍိင် ဍေ. Internet စါ်္ဘိုဝ် serial ဏှ် အင်းမိုင့် မ်ုဏှေ်ဏ်ှမွဲာအေး စင်္ဘိုဝ်ဏှ် ဖံင်းဍေ သ္တါ် ကိုဝ်ဟှာဍေဆာ်ၟ အ္ဘေးသာ အင်းမာဏေဝ်ၟ လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 2.9mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 1:02 AM 1 comments
Labels: Photo Instrument
အ်ုယိုဝ်ဏ်ှမွဲာ SWiSHMax3 ဆှေ်လဝ့် အ်ုဝေယိုဝ် မွဲာဝေ့ Flash, Video, EXE, GIF, Animation Softwear ဆှေ်လဝ့် အ်ုခါယိုဝ် စါ်္ဘိုဒ် ထီသိုဝ်သယ် မ်ုဍး္ဘး လု ning.com သယ်ဏှ် Flash Video အ်ှအးမာလဝ့် (အ်ုဍံင်) ထီသိုဝ်သယ် မ်ုတါင်္ဘးသာ ထာခေါဟ် ဆူ့လင်ဍေလိက် လ်ုဝါ်သယ် စါ်္ဘိုဝ်္ဘးအင်းမိုင့်ဝေ့ ဍေ Softwear လ်ုမိင်ယိုဝ် ဆှေ်လဝ့်္ဘးဖံင်းပ်ုသှေ်လယ့် ဝေ့သိုဝ်မ်ုသီးယာ့ဏှ် လု Folder ဖိုင်ဏှ် ယ်ုဆူ့လင်ဖှေ် ဍေ pdf လု္ဘိင်းဟှဝ် ပဝ်ၟယိုဝ်သယ် အေဟှံင် စံင်ယောဝ်ယ္ဘာိုဝ် အ္ဘေးသာစါ်္ဘိုဝ် အင်းမာဏေဝ်ၟ လ်ုအုဖံင့်လးဏ်ှဆာ်ၟ။ 51.25mb
Posted by ဇော်မင်းထွန်း at 5:25 AM0comments
Labels: Flash Creation Tool, Portables
ယု အှ်္ဘေ့မ်ုသီးယာ့
Copyright 2010 - စောဇော်မင်းထွန်း